ukuthi uwusebenzisa kanjani umshini we-paddy huller nokuthi yini esidinga ukuyinaka
umshini wokugaya irayisi ukusebenza kubaluleke kakhulu kuyo yonke inqubo yokucubungula irayisi. Manje, ake sikhulume ikakhulukazi ngokubaluleka komshini wokugaya irayisi.
Umshini wokugaya ama-rice ungasusa i-nerayisi futhi uyisigaba esiyisisekelo sokugaya irayisi. I-Rice umbungu nerayisi endosperm ifakwe ungqimba lwegciwane. Futhi ngemuva kokugaya, kungasiza ukwahlukanisa phakathi kombungu welayisi ne-endosperm ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle kwerayisi yokugaya kahle ukusebenza. Uma sisusa iklabishi yerayisi, singenza isitshalo sokugaya irayisi sikhiqize izigaxa zerayisi ngaphandle kwesiqu, okunambitheka okungcono. Ngaphandle kwalokho, ikhwalithi yesitshalo sokugaya iyathuthuka.
ke ukuthi uwusebenzisa kanjani umshini we-paddy huller nokuthi yini esidinga ukuyinaka?
1. Ngaphambi kokusebenzisa i-paddy huller, kufanele kuqala ihlole i-fastener iqinisiwe, ingxenye ejikelezayo ivumelana nezimo, yilelo nalelo mafutha, amayunithi we-husking abekwa emhlabathini oshelelayo.
2.Ngaphambi kokusebenzisa i-paddy huller, kufanele ihlole ukushintshwa kwe-voltage switch kufanele kube sesimweni es off.
3.Ngemuva paddy izimbobo ukuqala injini, Ukujika kwe-rotor nemishini ohlangothini lwe. Ukuqala kwemizuzu embalwa, ukubonwa akunamisindo engajwayelekile, ukuqinisekisa ukusebenza okujwayelekile, kungondla umkhiqizo.
4. Ama-Paddy kernels aqukethe isikhumba ukunqwabelana, ingalungisa ukuhamba komoya kube isivunguvungu, khuphula ivolumu yomoya yokumunca, ukuze kufezeke inhloso yokufakwa emzimbeni kwesikhumba.
5.Ukuqonda kahle ngaphandle kokuhlukaniswa kernel yembewu equkethwe ngaphezu kwesilinganiso, kufanele ilungise i-motor nesikhathi esisezingeni eliphezulu nge-engela, thuthukisa umphumela wokukhetha.
6. Ukukhiqiza, abantu abavela ekudlidlizelweni kwemoto kude, ukuvikela ukulimala.
7. Izinsiza kufanele ngaso sonke isikhathi zisuse ukungcola okungaphezulu kwesikrini nezinhlamvu ezisele nezinsimbi. Ukuze uqinisekise umphumela wokuhlushwa we-paddy. Izisetshenziswa kufanele zimbozwe lapho zingasebenzi, endaweni eyomile noMgcinimafa, ukugwema ilanga nemvula.